Mould - Mestech Industrial Limited
Mould (chakuvhuvhu) uye kufa zvishandiso zvekugadzira iyo isina chinhu kana mbishi zvinhu muzvikamu zvine chaiyo chimiro uye saizi pasi pekuita kwesimba rekunze. Ichi chishandiso chinoumbwa nezvikamu zvakasiyana, uye maforoma akasiyana anoumbwa nezvikamu zvakasiyana. Iko iko kugadzirisa kunonyanya kushandura chimiro cheicho chechinhu kuti chibudirire chimiro chechinhu. Mould uye kufa zvishandiso zvekugadzira kwakawanda. Kushandiswa muforoma kunonatsiridza kugadzirwa kunyatsoshanda uye inodzokorora kugadzira kururama zvikamu. Inozivikanwa se "mai veindasitiri".
Mould uye kufa zvinogona kukamurwa muzvikamu zviviri zvinoenderana nekugadzirisa kwavo maitiro
1.Ifa: iko kushandiswa kwemupendero chimiro kunogona kuita yakasimba isina chinhu kupatsanurwa (kuvhara) maererano nechimiro chechimiro, kana kukotama extrusion kuumbwa. Rudzi urwu rwefa rinoshandiswa kuvharidzira, kufa kwekuchengetedza, musoro unotonhora uye extrusion yezvikamu.
2. Mould: colloidal kana emvura zvinhu zvinoiswa jekiseni muforoma mhango, kana yakasimba zvinhu zvinonyungudutswa muforoma mhango, izere uye inotonhorera kuwana zvigadzirwa zvine zvakafanana chimiro seye mhango mhango. Iyi mhando yeforoma inoshandiswa mupurasitiki zvikamu jekiseni kuumbwa, silica gel kuumbwa, simbi kufa kukanda. Kazhinji kunze kwetsika, isu tinopatsanura kufa kweasina-feri simbi senge aluminium alloy uye zinc alloy sefa
Jekiseni muforoma yemotokari zvikamu
HASCO jekiseni anoumba
Zvinoenderana nezvinhu zvezvigadzirwa zvinoburitswa kuburikidza neforoma, chakuvhuvhu chakakamurwa kuva:
simbi muforoma, epurasitiki muforoma, uye pecial muforoma.
1.Metal muforoma: , extrusion kufa, kufa kufa kukanda kufa, kwekuchengetedza kufa, nezvimwe;
2.Nonmetal chakuvhuvhu yakakamurwa kuita: epurasitiki muforoma, inorganic isiri-yesimbi chakuvhuvhu, jecha chakuvhuvhu, vharuvhu chakuvhuvhu neparafini muforoma Pakati pavo, pamwe nekukurumidza kukudziridzwa kwepolymer mapurasitiki, muforoma wepurasitiki wakabatana zvakanyanya nehupenyu hwevanhu. Plastic muforoma inogona kazhinji yakakamurwa: jekiseni Kuumbwa muforoma, extrusion Kuumbwa chakuvhuvhu, gasi rakabatsira kuumbwa chakuvhuvhu, nezvimwewo
Foroma uye kufa ane chaiwo gandiwa kana mhango chimiro, uye varara anogona kuparadzaniswa (blanking) maererano gandiwa chimiro nokushandisa gandiwa chimiro pamwe kumucheto. Nekushandisa chimiro chemukati mhango, isina chinhu inogona kuwana inoenderana-mativi matatu chimiro. Iyo inowanzo sanganisira zvikamu zviviri: kufambisa kufa uye yakagadziriswa die (kana punch uye kufa), iyo inogona kupatsanurwa uye kuvharwa. Izvo zvikamu zvinotorwa kunze kana zvaparadzaniswa, uye iyo isina chinhu inojowa mukati mekufa mhango yekuumba kana ivo vakavharwa.
Pane matanho matatu mukugadzirwa kweforoma: 1.Mold dhizaini; 2.mold kugadzira; 3.Acceptance chakuvhuvhu
Mestech inopa vatengi dhizaini yezvipurasitiki zvikamu nesimbi zvikamu, kugadzirwa kwejekiseni muforoma, kufa kukanda chakuvhuvhu uye kusavhara muforoma. Uye kushandiswa kweforoma kugadzirwa kwemazhinji epurasitiki zvikamu, simbi zvikamu. Tiri kutarisira kushanda nemi kukupai chakuvhuvhu mukugadzira uye mapurasitiki, simbi kugadzirwa zvikamu uye mabasa.